सानै उमेरमा अर्बपति भएकी महिलाको एउटा सानो गल्तीले गयो ज्यान! |
February 22, 2022 adminLeaveaComment on सानै उमेरमा अर्बपति भएकी महिलाको एउटा सानो गल्तीले गयो ज्यान!
काठमाडौं । सानै उमेरमा अर्बपति भएकी एक महिलाको अल्पायूमा नै निधन भएको छ । सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म ‘पंखुडी’ र घर भाडामा दिने स्टार्टअप ‘ग्राभहाउस’ जस्ता स्टार्टअपकी संस्थापक पंखुडी श्रीवास्तवको निधन भएको हो ।झाँसीमा जन्मिएकी ३२ वर्षीया अर्बपति उद्यमी महिला पंखुडी श्रीवास्तवको मृत्युको खबरले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । पंखुरी श्रीवास्तवको हृदयघातका कारण निधन भएको हो । उनी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिइन् ।
क्मपनीले ट्विटरमा जारी गरेको शोक सन्देशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंखुडी श्रीवास्तवको २४ डिसेम्बरमा अचानक हृदयघातका कारण निधन भयो ।’ उनका बुबा र कान्छो भाइ बेङ्गलोरमा छन् ।डिसेम्बर २४ मा हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो । शवलाई झाँसी ल्याइयो र २६ डिसेम्बरमा अन्तिम संस्कार गरियो । पंखुडी श्रीवास्तवले आफ्नो बाल्यकालका साथी, काजू व्यवसायी आदित्यराज शर्मासँग २ डिसेम्बर २०२० मा झाँसी नजिकैको ओरछाको एउटा होटलमा विवाह गरेकी थिइन् । २ डिसेम्बर, २०२१ उनको विवाहको पहिलो वार्षिकोत्सव थियो ।
कान्छो भाइले बहिनी मुम्बई पुगेपछि बस्नको लागि फ्ल्याट चाहिएको सुनाए । उनले भाडामा फ्ल्याट पाउन धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो । द’लालहरू’लाई चर्को शुल्क तिर्नुपरेको अनुभव उनीसँग थियो ।त्यसपछि घर भेटियो । फल्याट खोज्दा हरुबाट ठगिएकी उनको दिमागमा घरजग्गा सम्बन्धी कम्पनी किन नखोल्ने भन्ने कुरा आयो । ठूला शहरमा मानिसहरूले घर पाउन धेरै संघर्ष गर्नु नपरोस् भनेर उनले कम्पनी शुरू गरेकी थिइन् ।